Arooska jiilaalka: dareenka iyo ixtiraamka
Taageerayaasha "aroosyada qaboobaha" sanadihii la soo dhaafay waxay noqonayaan kuwo aad u badan. Xitaa dhibaatooyinka suurtagal ma aha inay joojiyaan dadka dhalinta yar inay ka ciyaaraan arooska jiilaalka. Mid ka mid ah dhibaatooyinka waa baraf xoog badan, ama baraf la'aan, sababtoo ah waxa aad u baahan tahay inaad ku dhex socoto dhoobada. Laakiin kuwa cusub oo go'aansaday in ay ciyaaraan arooska xilliga qaboobaha, oo ka mid ah minuses, waxay raadinayaan faa'iido, taas oo habka ay u badan yihiin.
Arimaha wanaagsan ee arooska qaboobaha
Faa'iidada ugu muhiimsan ee arooska ee xilliga jiilaalka waa qiimo dhimista qiimaha oo dhan ee dhammaan goobaha diyaarinta ee maanta iyo fududeynta raadinta wax kasta oo lagama maarmaan ah. Xaafadaha banaanbaxyada iyo makhaayadaha, sida caadiga ah, qiimayaasha, dharbaaxayaasha iyo farshaxanada farshaxan-yada ayaa aad uga yar adeegyadooda, in ka yar hal sano, iyo baabuurtii kirada ee xilliga jiilaalka waa la qaadan karaa aad u jaban. In xafladaha arooska ee dharka arooska iyo accessories kala duwan, waxay noqdaan kuwo weyn, kharashka waa la yareeyey. Mararka qaarkood saladhka ayaa qabanqaabiya iibka. Vsalonah waxbadan kuma xirna, sidaas daraadeed iibsadaha-iibiyaha ayaa ku siin doona waqti kugu filan, oo aan laguu sheegi karin bilaha xagaaga. Waxaad si ammaan ah u tijaabin kartaa dharka mid ka mid ah saloon, adoo dooranaya qaar ka mid ah sawirada, inaad u safartid dhowr xarumo badan iyo haddii aadan jeclayn wax kale, ku soo celi salon, halkaasoo aad sugi doonto dharka arooska aad dooratay.
Wedding xilliga qaboobaha waxaa sidoo kale lagu ciyaari karaa labada lamaane ee ku xaddidan macnaha, laakiin waxay rabaan inay maalintaas u gudbaan dhamaan sifooyinka dhaqameed. Bilaha jiilaalka, ma jiraan duqoobo iyo cirbado, taas oo xagaaga xaga qulqulatooyinka ka dambeeya xafiiska diiwaangelinta.
Waxaa jira calaamad muujineysa in haddii roobab arooska maalinta arooska ah, ka dibna ay wanaagsan tahay, laakiin ogow in barafku wali ka sii fiican yahay. Intaa waxaa dheer, wakhtigan xaadirka ah waxaa jira moodooyinka "jiilaalka" ee dharka arooska oo qurux badan, iyo sidoo kale dharka caleenta ama dharka. Sidaa daraadeed, aroosadda si dhab ah ma ahan kuwo lagu yareeyo.
Markaad timaado diiwaan-hayaha si aad u dalbato taariikhda la doortay, ma arkaysid safka. Waxaa haboon in la xuso muuqaalka quruxda badan ee quruxda badan ee sawirada arooska. Geedaha ka dib marka barafku u muuqdo mid aad u qurxoon, waa in ay noqdaan kuwo jilicsan oo qalafsan. Waa hagaag, maalinta dadka jecel oo dhan waa Febraayo 14, ma aha mid jaceyl ah in la ciyaaro arooska maanta?
Dharka arooska loogu talagalay arooska qaboobaha waxaa laga dhigi karaa walxahaas oo kale sida lebbiska, marinka, kooraha! Dharka lagaa saaro, waxaad ku ridi kartaa jaakad oo leh rinjiga, waxaad kaloo xiran kartaa gacmo gashi. Jidka dhexdiisa waxaa ka wanaagsan in laydhka lagu beddelo jaakad cad, haddii kale waxay ku barafoobi doontaa barafka mana muuqan doonto mid aad u qurxoon, ilxadana waa la gashan karaa markay timaaddo makhaayad. Kabaha dabbaasha waxaa lagu bedeli karaa kabaha laysku qurxiyo. Aroosku wuxuu xiran karaa dhar, isaga oo doorbidaya alaabada cufan (dhammaan jiilaalka isku midka ah), mujuruc, jaakad jilicsan iyo galoofyo. Waa hagaag, hadda dhallinyaradu si ammaan ah ayey u socon karaan socod!
Socodka, waxaad dooran kartaa beeraha jardiinooyinka iyo beeraha jardiinooyinka, waxaad booqan kartaa barafka barafka ah oo aad iskaga tagi kartid, barafka kubbadda iyo xitaa yaaba "dhismayaasha jacaylka weligeed ah." Waxaad xitaa ku fuuli kartaa qoorta oo ay la socoto seddex sawir oo qurux badan leh faraha iyo ka dibna riyooyin aan la ilaawi karin iyo sawirro caajis ah ayaa la siiyaa!
Dhibaatooyinka arooska qaboobaha
Nasiib darro, waxaa sidoo kale jira waxyaabo taban ee aroosyada qaboobaha. Dhibaatada ugu weyn waa in ay tahay qaboobo xilliga jiilaalka, dharka arooska waa la toogaa marka laga soo bilaabo qalabka casriga ah iyo kuwa fudud. Sidaa daraadeed, dhalinyaradu si buuxda uma qaadan karaan maalintaas muhiimka ah iyaga oo u socdaalaya magaalada. Aroosadda waa in lagu sawiraa mar walba maro dhar ah ama dhar, kaas oo daboolaya quruxda dharka barafka cad.
Intaa waxaa dheer, baraf cad iyo dhaxan ayaa si lama filaan ah u noqon kara dhalaalid, taas oo macnaheedu yahay duufaanno iyo boodhka wasakhda ee wasakhaysan ayaa soo bixi doona. Ka taxadar inaadan dharka ka dhicin iyo / ama aanad ku qoynin cagahaaga.
Gaadiidka, dhibaatooyinka ayaa laga yaabaa inay soo baxaan, gaar ahaan haddii barafku uu tago maalinta arooska. Dorogimogut ma nadiif ah, iyo xarkada arooska ayaa ku xayiran baabuurta jidka ZAG.Mozhet epidemic ee hargabka iyo inta badan martida ayaa jiran.
Ganacsiga laga jaray waa nooc yaryar oo ubax ah iyo siciradooda, ma aha xilli! Dhabarka caadiga ah ee qabowgu si deg deg ah u foorarsato. Kharashka geela ee makhaayadda ayaa sidoo kale kor u qaadi kara, sababtoo ah miro iyo khudaarta jiilaalku way ka qaalisan yihiin waqtiyada xagaaga.
Ha isku dayin inaad arooska la cayaarto ka hor Sanadka Cusub, oo aaminsan in tani ay ku badbaadi karto, ilaawi, qiimaha ka baxa isla markiiba!
Wuxuu guursaday da 'kasta
Top 5 aroosyada kala duwan ee aroosyada gudaha ee 2015
Sidee ayaad u jeceshahay ninkeeda mustaqbalka?
Wedding in meel xiiso leh
Guurka madaniga ah: ee loogu talagalay iyo ka hortagga
Meelaha daaweynta ee gacmaha
Daryeel ka dib dibnaha markaad joogto joogto ah
Horoscope for December 2017 - Kansarka Haweenka - laga bilaabo Tamara Globa iyo Angela Pearl
Alexey Panin, wararkii ugu dambeeyay
Haddii aad qof jeceshahay shaqada, waxa la sameeyo
Sidee looga faa'iideysan karaa cunista cuntada waxyeelada leh
Qashin-qaadashada: sakhraanka Volochkova wuxuu u muuqday telefishanka dhexe, video
Maalmihii guusha ee ku guuleysashada bakhtiyaa-nasiibka ee December 2017 dhammaan calaamadaha jilitaanka
Foosto doofaar leh toon
Barnaamijka maqaarka iyo quruxda jidhka
Horoscope 2010: Aries, Tiger
Kabaha qubeyska, daaweynta dadka
Anna Semenovich ayaa lagu qoslayay sawirada barafka la yareeyay
12 siyaabood oo aanad wax cunin habeenkii
Sidee loo nadiifiyaa jaakadaha maqaarka?